Muxuu ka yiri Garsoorihii dhex-dhexaadinayay kulankii El Clásico RABSHADII dhex martay xidigaha Messi iyo Ramos??? – Gool FM
Muxuu ka yiri Garsoorihii dhex-dhexaadinayay kulankii El Clásico RABSHADII dhex martay xidigaha Messi iyo Ramos???
(Spain) 5 March 2019. Garsoore Alberto Undiano Mallenco ayaa aamisan in Lionel Messi uu isaga isku tuuray dhulka, kadib markii uu matalay in ay ku dhacday gacanta Sergio Ramos, inta uu socday kulankii Sabtida ee El Clasico.
Alberto Undiano Mallenco oo ahaa garsooraha kulankii ugu dambeeyay ee El Clasico ayaa go’aansaday in uusan Ramos ku ciqaabin kaarka casaanka ama Roosaha.
Kulankii dhawaa ee Clasico, ayaa lagu arkay isqab qabsi iyo rabshado xoogan ee labada dhinac, waana wax aanan ku cusbeyn kulamada El Clasico ay ciyaarayaan kooxaha Barcelona iyo Real Madrid.
Ku dhawaad dhamaadka qeybtii hore ee ciyaarta xidigaha Sergio Ramos iyo Messi ayaa isku dhacay, taasoo sababtay in xidiga reer Argantina uu in mudo ah dhulka yiilay, kahor inta uusan istaagin isla markaana si kulul ula doodin kabtanka kooxda Real Madrid.
Hadaba sida laga soo xigtay wargeyska “Sport” ee dalka Spain garsoore Alberto Undiano Mallenco ayaa wuxuu xaqiijiyay in Lionel Messi uu isaga si ku talagal ah isku tuuray dhulka.
Si kastaba hadalka Garsoore Alberto Undiano Mallenco ayay ka dhigan tahay in kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos uu yahay mid aan waxba galabsan.
Dhinaca kale Antonio Mateu Lahoz oo ahaa garsooraha mas’uulka ka ahaa aalada VAR ee kulankii El Clasico ayaa yiri:
“Ma jirin wax uu u qalmay Sergio Ramos in lagu ciqaabo”.
Xiddigihii Saaxiibada ahaa ee Lukaku iyo Pogba oo Dagaalay iyo Tababare Solskjaer oo soo kala dhex-galay....(Maxaa la isku qabtay?)